jeudi, 05 mars 2020 21:56
Antsirabe: Mpiasa roa amina orinasa afakaba maty amperin’asa
Vehivavy roa, mpiasa amina orinasa afakaba roa samihafa, no maty amperinasa tao anatin’ny herinandro. Raha fahatsentsenan’ny lalan-drà no voalaza fa nahafaty ny iray, dia harerahana be loatra izay nitarika aretina, nefa tsy nahazo « repos » na nandeha naka fanafody tany amin’ny toeram-pitsaboana ny mpiasa aza. Nitolefika tao anaty toeram-pivoahana ilay mpiasa, ary tsy tana ny ainy na dia nifamonjena nentina namonjy dokotera aza. Nahatezitra ireo mpiara-miasa aminy ity tranga faharoa ity, ka nanapa-kevitra hirava alohan’ny fotoana fiasana izy ireo ho fiombonam-po sy firaisankina amin’ilay vehivavy mpiasa nopaohin’ny fahafatesana ity.
Nambara ofisialy omaly 03 martsa 2020 tao amin’ny Sekolin’ny Zandarimariam-pirenena Ambositra, ny valin'ny fifaninanana fidirana andiany faha-75 ho mpianatra zandary. Nitarika izany ny jeneraly Njatoarisoa Andrianjanaka, Komandin'ny Zandarimariam-pirenena, notronin'ireo tomponandraikitra ambony eo anivon'ny Zandarimaria. Miisa 1200 no noraisina ka 1069 lehilahy ary 131 ny vehivavy. Nanomboka avy hatrany ny fiofanan'ireo tafiditra ka handritra ny 12 volana izany.
Tontosa androany talata 03 martsa 2020 teto Antsirabe ny lanonana nametrahana amin’ny toerany ny Governoran’ny Faritra Vakinankaratra Vyvato Rakotovao. Nisy nialoha izany ny fanaovan-tsonia ireo antotan-taratasy fifamindran-draharaha teo aminy sy ny lehiben’ny Faritra Vakinankaratra mpisolo toerana, Rakotomahandry Thimoté izay nitondra an’i Vakinankaratra nandritra ny 11 volana. Naneho ny fahavononany hampandroso an’i Vakinankaratra ny Governora ary hiroso amin’ny fanoritana ny vinam-pampandrosoana mifaka amin’ny Velirano napetraky ny Filohan’ny Repoblika izay efa nivadika ho Politika ankapoben’ny Fanjakana.
Nanomboka ny 25 janoary lasa teo, olona miisa 34 no noraisina an-tanana tao amin’ny hopitaly CHU Anosiala Ambohidratrimo. Ny 4 tamin’izy ireo no noahiahiana ho voan’ny « coronavirus » ka nanaovana ny fizahana sy ny fitiliana ara-pahasalamana rehetra. Hita tamin’izany fa tsy nisy na iray tamin’izy ireo aza nitondra ilay valan'aretina. Hatreto, olona miisa 28 no efa nivoaka ny hopitaly rehefa natao tamin’ny toerana voatokana nandritra ny 14 andro, ary 9 kosa amin'izao fotoana izao no mbola arahi-maso eny an-toerana.
Sambava: 157 ireo fiara nampidirina ''fourrière'', henjan-droa ny tady ...
Gaboraraka ny fifamoivoizina, indrindra eo amin'ny fitateram-bahoaka ato amin'ny Faritra SAVA. Tsy faly amin'ny fandaminana ireo mpitatitra ka nanao fitokonam-be, tsy niasa ireo zotra rejionaly mampitohy an’i Sambava sy Antalaha ny faran’ny herinandro teo. Fitakiana maro no nasetrin'izy ireo izay nisy ny saro-bahana satria hatramin'ny fanesorana ireo mpiasa manontolo ao anaty koperativa, ny fitakina ny mangaraharaha ny amin'ireo vola maro takiana amin'izy ireo: manifold, « droit de stationnement », "Laissez-passer » ... Nipoiran’ny fihetsiketsehana ny nigiazan’ny Polisy fiara roa izay nanao ''racolage'' ka niafara tamin'ny fampidirna « violon » ireo mpamily roa nandritra ny 48 ora. Nisy avy hatrany ny fananganana ny ''Commission Mixte de Contrôle de sécurité routière'' izay ahitana ireo mpisehatra amin'ny fitaterana, ny Zandary, Polisy, foiben-ketra, ny Kaominina, ATT, koperativa izay manana tanjona hanadio tanteraka ny gaboraraka amin'ity fitaterana ato amin'ny Faritra SAVA ity.
Ny omby nihahaka teny an-tanimbolin’olona no nanaitra ny tompon’omby raha tafaverina teo an-tanànan’i Bemololo, Kaominina Andranomanelatra, Distrika Antsirabe II, lalam-pirenena faha 7, androany zoma 28 febroary tolakandro, avy namangy marary teny Antsirabe. Nantsointsoina ny anarany fa tsy nisy namaly. Natao ny fikarohana dia hita teo amoron’ny dobo iray, izay tanimbary nolavahana no nanamboarana azy, ny fitafiana sy ny kapa nanaovan’ilay tovolahy, niaraka tamin’ny japy na karavasy fiambenana omby. Nino ireo mpampiasa azy sy ny Fokonolona fa nilomano tao ilay tovolahy ary mety rendrika ao. Natao avy hatrany ny fikarohana saingy maizina ihany ny andro nefa tsy mbola hita ilay zazalahy. Natsahatra ny fikarohana rehefa maizina ny andro ary hotohizana rahampitso vao maraina. (Jereo Sary Tohiny)
Tonga teny A&C Hôtel Ivato androany zoma 28 febroary ny vadintany, nombana mpitandro ny filaminana, hampihatra didim-pitsarana ny hanagejana ny fananan’ny A&C Hôtel noho ny hetra tsy naloan’ity orinasa ity. Mitentina 59 lavitrisa Ariary io hetra tsy voaloa amin’ny fanjakana io nandritra ny 5 taona, miampy sazy mitentina 20 lavitrisa Ariary. Hatao lavanty avy hatrany amin’ny 4 martsa ireo entana nogiazana ireo, aorian’ny fanaovana tombana azy ireo.
vendredi, 28 février 2020 10:06
RN27: Tapaka ny tetezana mampifandray an’i Ivohibe - Voindrozo – Farafangana
Nitolefika tampoka ny tolakandron’ny alakamisy 27 febroary 2020 ny tetezana lehibe iray amin’ny lalam-pirenena faha-27 mampifandray an’i Ivohibe - Voindrozo – Farafangana. Tsy orana avy, tsy rivodoza na horohorontany niseho. Heverina ho ny fahanteran’ny fotodrafitrasa no nitarika ny fahasimbana, manampy trotraka ny tsy fanajan’ireo fiara mpitatitra entana ny vesatra tokony ho zakan'ny tetezana. Tsy nisy aina nafoy. Sarotra ny manisy fivilian-dalana eto nefa tena iankinan’ny famatsiana ireo entana ilain’ny mponina amin’ny fiainana andavanandro ity lalana ity, toy izany koa ireo olona mila famonjena maika noho ny antony ara-pahasalamana. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 27 février 2020 20:41
Coronavirus: Nakatona ny sekoly any Japon, depiote frantsay iray niangaviana tsy hivoaka ny tranony
Coronavirus, io no mameno ny vaovao manerantany. Voakasika avokoa na ny sehatra sosialy, na toekarena, na politika, eny hatrany amin’ny tontolon’ny fanatanjahantena sy ny finoana. Manoloana ny fihombon’ny coronavirus dia nanapa-kevitra ny governemanta japoney androany alakamisy 27 febroary 2020 fa mikatona vonjimaika avokoa aloha ny sekoly, hisorohana ny fiparitahan’ity valanaretina ity, araka ny nambaran’ny praiminisitra Shinzo Abe. Any Italia indray, dia mpilalao baolina kitra matihanina iray, 22 taona, milalao ao amin’ny klioban’ny US Pianese (Serie C) no voamarina fa voan’ny Coronavirus.
jeudi, 27 février 2020 12:50
Fampianarana: Nitondra fanazavana mahakasika ny tambin-karama ny Minisitra
Nitondra fanazavana momba ny tambin-karama takian'ireo mpampianatra sy mpandraharaha momba ny fampianarana ny eo anivon'ny Ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-tekinika sy arak'asa, fa eo ampitadiavana vahaolana ny ministera. Ekena hoy izy fa nisy fifanarahana natao teny amin'ny lapam-panjakana Mahazoarivo ny volana jolay 2018, ary tsy vao izao no nitady ny fomba ampiharana io fifanarahana io ny fitondrana, nefa noho ny fikatsahana ny fampitoviana lenta eo amin'ny mpiasa rehetra, dia nisy fanitsiana natao momba io didim-panjakana nivoaka io. Eo ampamaranana ny dingana rehetra ny Ministera sy ny Governemanta, hoy hatrany ny fanambarana, ary manamafy ny fikatsahana ny vahaolana ampiharana ny fanatanterahana ny fifanarahana.